प्रहरीका पुर्व हवल्दार किड्नी बेच्न पञ्जावमा, श्रीमतीले घर न घाटको बनाएपछि पर्यो यस्तो बाध्यता (भिडियो हेर्नुहोस्)
Homeसमाचारप्रहरीका पुर्व हवल्दार किड्नी बेच्न पञ्जावमा, श्रीमतीले घर न घाटको बनाएपछि पर्यो यस्तो बाध्यता (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 28, 2020 admin समाचार 4810
शसस्त्र प्रहरीमा ९ वर्ष काम गरेका एक युवक अहिले आफ्नो कि’ड्नी बे’च्न भन्दै भारतमा भौ’तारिएका छन् । भएको सम्पत्ती सकियो, श्रीमतीले स’म्पत्ती सकिदिइन् १३ वर्षको उमेरमा छोरीले विवाह गरेर हिडिदिइन् । त्यसपछि उनी अहिले किड्नी बेच्न भन्दै भारतको महाराष्ट्र पुगे । दाईले घर बेचेर दिएको दुई लाख रुपैया पनि सकियो । तर अहिले कुनै उपाय नभए’पछि उनी आफ्नो किड्नी बेच्न भन्दै भारत पुगे । उनी शसस्त्र प्रहरीका पूर्व हव’ल्दार हुन् । किड्नी बे’च्न उनी भारतको पञ्जाव पुगेका छन् ।
खिलबहादुर खत्री उनको नाम हो । उनको स्थायी ठेगाना दागंको घो’राहीमा छ । घोराहीमा भएको सबै स’म्पत्ती सकियो । अहिले म संग एउटा टि सर्ट मात्र छ । पहिलो श्रीमती विदेश गएपछि सम्ब’न्ध विग्रियो । उनले कान्छि श्रीमती विवाह गरे । श्रीमतीलाई विदेश नजा भनेर सम्झा’एको थिए तर उनी नमानेर विदेश गइन् । आफु शसस्त्र प्रहरीमा जागिर गर्ने भएकाले नयाँ घरमा राख्छु विदेश जानु पर्दैन भनेर सम्झाउँदा पनि मानिनन् । त्यस पछि उनीहरुको सम्ब’न्ध विग्रियो ।
दोस्रो श्रीमती ल्याए पछि पनि पहिलो श्रीमतीले कुनै सम’स्या पारेकी छैनन् । उनी विवाह पछि पनि नेपाल फर्कि’एन् घरमै आएर बसिन् । शसस्त्र प्रहरीको जागिरवाट १३ हजार रुपैया मात्र तलब थियो । जागिरको तलबले घर बनाएको ऋ’ण पनि तिर्न नसकेपछि उनले जागिर छोडे । उप’दानवाट आएको साढे ६ लाख रुपैया घर बनाउँदा लागेको ऋ’ण तिरे । त्यसपछि उनी मलेसिया गए । त्यहाँ राम्रो कमाइ थियो । मलेसियामै भेटिएकी अर्की महिलासंग उनले आफ्नो घर पठाए । घर पठाउनु अघि सिन्दुर हा’लेर विवाह गरेर पठाइदिए ।
जसलाई विश्वास गरेर दो’स्रो विवाह गरे, सबै सम्पत्ती सम्पिए उनैका कारण अहिले सडकको बा’स भएको छ । मलेसियावाट फर्किएपछि पनि उनले महिनामा ४० हजार क’माउँथे तर दोस्रो श्रीमतीले उनलाई घर न घाटको बनाइन् । वृद्ध आमा बुवा, छोरीले पनि छोडेर हिडिन्, सानो छोरा छ । घर गएर बस्ने बास पनि छैन । त्यसैले उनी भारतमा किड्नी बेच्न भन्दै पुगेको बताए । – इ ताजा खबर बाट
सुनको मूल्य वृद्धि, कतिमा कारोबार भइरहेको छ?
सलमान खानको जन्मदिनमा, शुष्मा कार्कीले के गरिन् यस्तो ?
कोरोनाका बिरामीको उपचार गाँ’जाबाट हुनसक्ने वैज्ञानिकको नि’ष्कर्ष
November 1, 2020 admin समाचार 5971
विश्वभर महा’मारीका रुपमा फैलिए’को कोरोना भाइरसको संक्र’मणबाट गम्भीर बनेका बिरामी’को गाँजाबाट उपचार हुनसक्ने वैज्ञानि’कहरुले बताएका छन् । अमेरिका’स्थित साउथ यारोलिना विश्ववि’द्यालयका अनुसन्धा’नकर्ताले गरेको अध्य’यनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । वैज्ञानिक’हरुले यसबारेमा तीनवटा अध्य’यन गरेका थिए
January 5, 2021 admin समाचार 5310
केहि दिन अगाडी स’क्किगोनी टेलीसिरियलमा बिदेशीको भूमि’कामा रहेका बिदेशी नागरिक काले दाई पहि’लोपटक मिडियामा आएका छन।सबैलाई हँ’साएर चकित पारेका उक्त व्यक्ति साच्चिकै हसाउने रहेछन।उनि हसाउने मात्र हैन अरुलाई रूहाउँन समेत पछि परेनन् कारण उनको व्यक्तित्व
सांसद नबिना लामा बनिन् आमा ! तस्बिर सेयर गर्दै यस्तो लेखिन्..
August 27, 2020 admin समाचार 12272
सांस’द नबिना लामा आमा बनेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसवु’कमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसको जान’कारी दिएकी छन् । उनले छोरालाई जन्मदिएकी छन् । उनी तत्कालिन अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष समेत रहेकी लामा प्रतिनिधि’सभामा सदस्य समेत हुन्